Creative Writing » G	19
Posted by Thint Aye Yeik on Mar 22, 2016 in Creative Writing, Critic, Drama, Essays.., My Dear Diary | 19 comments
ဂျက်စပဲရိုး says: ဆုပ်ကိုင်ထားလေလေ ပင်ပန်းလေလေ
Thint Aye Yeik says: ဂျက်ဂျက်ရေ
kai says: အသက်ရဲ့သဘောသဘာဝမှာကိုက.. ဆုပ်ကိုင်ထားရမှာပါတယ်..။
Thint Aye Yeik says: .သေခါနီး လူမမာတစ်ယောက်ကို တို့ဗမာတွေ ပြောတတ်တာ ၂မျိုး ရှိတယ်။
kai says: ဘယ်တခုမှ အကျိုးမပြူဘူး..။ နောက်ဆံတင်းမနေနဲ့လို့ဆိုတာဟာ.. နောက်ဆံတင်းစရာရှိနေတာကိုသတိပေးသလိုဖြစ်တတ်ပြီး..
သေခါနီးလူနာတယောက်ကို.. သူစိတ်ချမ်းသာစေဖို့တခုထဲ ရည်ရွယ်လုပ်ရပြောရမယ်..။ ဒါက လူသားဆန်မှုပဲ…။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14459
kai says: အပေါ်က.. Grasp all, lose all ကို
ကဲ… ဖွပေးလိုက်ပြီ.. တွေးပေတော့….။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12396
ခင်ဇော် says: ဟာဂျာ
ခင်ဇော် says: လူမှုရေးး ဘက် က ပြောရအောင်..!!
Thint Aye Yeik says: မမဂျီးပြောတာ သဘာဝကျတယ်
ဂျက်စပဲရိုး says: အာ့ကြောင့် ဗုဒ္ဒ က မဇ်ဇိမ ပဋိပဒါ (စာလုံးပေါင်း သည်းခံဘာ) ဆိုပြီး ပြောခဲ့တာ နေမယ်။
(လောကီ ရော လောကုတ္တရာ ရော သုံးလို့ရတယ် ဟုတ်?? :P )
kai says: ဟုတ်ပါ့..။ ဘယ်အရာမှ ပုံသေမရှိ.. ကံ..ကံအကျိုး… ဟိုဖက်ကကံ..အလုပ်ကိုကြည့်ပြီး.. ဒီဖက်က… ထိုက်သင့်သလိုတုံ့ပြန်ရမယ်…။ တုံ့ပြန်ရမှာ.. အစွဲကင်းနိုင်သမျှကင်း.. မဇ္ဈိမပဋိပဒါလေးနဲ့…
၀င့်ပြုံးမြင့် says: ဦးလေးရေ ဦးလေးရဲ့ ကြိုးခြောက်ပင်ဆိုတာ တွေးနေတာ။ လူ့ဘ၀မှာ အဲဒီကြိုးတွေ မရှိတော့ရင် ဘ၀ရဲ့ ဂုဏ်ရည်ဟာလည်း ဘယ်ရှိတော့မလဲ။ တကယ်တော့ အဲဒီလောက်လှတဲ့ သံယောဇဉ်ကြိုးတွေဆိုတာ ထိုက်မှ ရတာပါ။ မ်ိတ်ဆွေကောင်းဆိုတာ ထိုက်မှ ရသလို မိသားစု သံယောဇဉ်ဆိုတဲ့ ကြိုး တွေဟာလည်း ထိုက်မှရတာ။ တကယ်တော့ ဦးလေး ဟာ ကံကောင်းတဲ့လူဆိုတာ ကိုယ့်ဟာကိုယ် မသိသေးဘူး ။
Thint Aye Yeik says: အဲ့ဒီ ကြိုးတွေက ကျနော့်ကို ၂၉ နှစ်လူံးလုံး တုတ်နှောင်နေတာ
uncle gyi says: ဂွေးတောက်ရွက်ကခါးတာပဲ
Thint Aye Yeik says: အာ့လည်း ဟုတ်နေပြန်ရော
Kaung Kin Pyar says: တခါတလေ.. လူတစ်ယောက်ဆုပ်ကိုင်သင့်တဲ့အရာက တခြားလူတစ်ယောက်အတွက် လွှတ်ချသင့်တဲ့အရာလဲ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေနိုင်သေးတယ်….။
Thint Aye Yeik says: ဒါလည်း ဟုတ်တာပဲ။
ယမကာကျော်စွာ အူးမြောက်မြောက် (B.E) says:ှရှင်းရှင်းပြောကြဂျာ
Thint Aye Yeik says: .လောလောဆယ် သဂျီး နှုတ်ခမ်းမွှေးကြီးကို နှုတ်ဖို့ ရယ်ဒီ ကိုင်ထားတာ အကောင်းဆုံးပဲ ထင်တယ်